Nzuzo nke coriander na-eto eto na ite, elu na windowsill n'afọ niile - N'ime ụlọ osisi - 2020
Otu esi eto cilantro na windowsill, ntuziaka maka ịgha mkpụrụ na ilekọta osisi na ụlọ
Ọtụtụ ndị kweere na nkà na ụzụ nke coriander na-eto eto dị nnọọ mgbagwoju anya na ọ gaghị ekwe omume ịkọ osisi a na windill windows gị. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi eto osisi a bara uru n'ụlọ gị.
Osisi a bu ezigbo "ndi okachasi di ndu," ma na-eto ya ga - ewetara obughi nani "ego" di na nri, kamakwa uru ndi ahuike. Anyị ga-ekwu banyere otu esi eto cilantro na windowsill n'ụlọ.
Kedu esi eme ka coriander na-eto eto n'ụlọ, ihe ndị chọrọ maka inwe ọganihu nke ọma
Ihe kwesịrị ịbụ ikike maka ọdịda
Ihe ndị dị n'okpuru ya
Ebee ka a ga-edozi ite na seedlings
Coriander: ịgha mkpụrụ
Otu esi elekọta coriander
Kedu esi ewe ihe ubi ma chekwaa ihe ubi sitere na sill window
Ntakịrị ntakịrị, esi enweta coriander ọhụrụ (cilantro) otu afọ
Osisi a nwere ọtụtụ aha: coriander, cilantro, hamem, kolandra, chilantro, sancho, dhaniya.
Ị ma? Aha "coriander" sitere na Grik oge ochie "koros", nke sụgharịrị dị ka "ahụhụ", n'ihi na ísì nke greenery yiri ísì nke ahụhụ a ...
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a abịara anyị site na Mediterranean. Coriander ma ọ bụ cilantro - osisi kwa afo, onye otu ulo nke Umbrella, osisi nke di nkpa nke ruru 40 cm. The coriander okooko osisi na-acha ọcha ma ọ bụ acha odo odo pink okooko osisi, gbakọtara inflorescence "nche anwụ".
A na-eke epupụta nke osisi ahụ n'ime ọkwa 2: epupụta ala dị na mgbọrọgwụ ya ma jiri obere cloves dị n'akụkụ ọnụ ya, a na-ekekwa akwụkwọ elu ya n'ime lobules na ọtụtụ ngalaba. N'ihi ụdị ụdị akwụkwọ ahụ, cilantro na-akpọkarị pasili. Osisi ahụ nwere isi ísì dị iche na nke bụ eziokwu na pasent 80 nke coriander gụnyere mmanụ dị mkpa.
Ọtụtụ ndị kwenyere na cilantro apụghị ịmalite n'ụlọ na windill, ma ọ bụghị. Tupu ịmalite kụrụ cilantro, ịkwesịrị ịkwadebe ihe niile ịchọrọ: ite, ala, ma chee ebe ị ga-etinye osisi ahụ. N'ịkọtakwu otu esi etinye cilantro n'ụlọ, anyị ga-ekwurịtakwa.
Iji mee ka ahụ dị jụụ, tupu ịmalite ịmalite, ọ dị gị mkpa ilekọta ikike nke osisi.
Ọ ka mma ịhọrọ otu akụkụ anọ, nke nwere oblong nke dị omimi nke 40-45 cm na obosara nke 25-30 cm. A ga-achọ nnukwu ite ahụ maka coriander n'ihi na osisi ahụ anabataghị transplants, usoro mgbọrọgwụ ya dịkwa nnukwu.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị kpebie ịmalite cilantro na ụrọ, ọ ka mma ịhọrọ ite na-enweghị enamel.
Tupu ị na-akụ cilantro na tank, ị ga-ahụkwa na enwere oghere drainage na ite ahụ, n'ihi na coriander adịghị anabata mmiri dị ọcha na mgbọrọgwụ.
Mgbe ị na-ekpebi ịkụ cilantro, ị ga-ahọrọ mkpụrụ edozi maka osisi ahụ, coriander hụrụ loamy ma ọ bụ ájá ájá ájá. Uzo nke ala kwesiri igbasa. Ị nwere ike ịzụta ala dị njikere na ụlọ ahịa ahụ, ma ọ bụ ị nwere ike iji ala gị, mgbe ị jikọtara ya na humus ma ọ bụ compost. Ụwa ga-anọpụ iche ma ọ bụ nke na-adịghị ike. Kwa kilogram nke ala ngwakọta, tinye 2-3 tablespoons nke osisi uyi.
Ị ma? Ka osisi ahụ wee dịkwuo mma, ọ ka mma iji kpoo ala tupu ịgha mkpụrụ na oven, nke a ga-eme ka ala nke nje bacteria na microorganisms dị njọ.
Ka cilantro na windowsill na-atọ gị ụtọ n'afọ niile, a ghaghị itinye ite ahụ na seedlings ga-etinye n'ime ụlọ ebe ikuku ikuku adịghị ada n'okpuru 15 Celsius. Cilantro kwesịrị ịnweta ìhè nke 12-14 ụbọchị n'ụbọchị, ịnwere ike ịnwe ọkụ ọkụ ọzọ na ọdịdị ọkụ ọkụ ma ọ bụ ntanetị pụrụ iche, n'ihi ya, ọ ka mma itinye ite ahụ n'ebe dị mma. N'ebe ndịda ma ọ bụ n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke ụlọ kacha mma.
Ịgha mkpụrụ coriander n'ime ite ahụ nwere ike ịmalite n'oge mbubreyo nke March. A pụrụ ịgha mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ, ị nwere ike ịnakọta site na osisi ha. Ọ dị mkpa na afọ nke osisi abụghị ihe karịrị afọ abụọ, ma ọ bụghị na cilantro nwere ike ọ gaghị ebili.
Tupu ịgha mkpụrụ osisi, ọ ka mma ịkwanye ha na mmiri ruo awa 1-2, ya mere Ome ga-apụta ngwa ngwa. Ihe omimi nke coriander kwesịrị ịdị 1-1.5 cm. N'iburu na mkpụrụ osisi cilantro buru nnukwu ibu, site na mkpụrụ 3 ruo 10 nwere ike kụọ ya n'otu akpa.
Mkpụrụ ndị a kụrụ n'ubi a kwadebere na-ekpuchi ụwa "abreast", tamped na ubé moisturized. Mgbe ahụ wụsara coriander nnọọ ụba. A ghaghị itinye ikike na ihe ọkụkụ na ebe ọkụ na-acha ọkụ tupu ntuputa nke mbụ Ome.
Ọ dị mkpa! Ịgbara ihe ndị a kụrụ akụ ga-abụ nke ntan na site n'oge ruo n'oge "ikike" ikuku.
Mkpụrụ mbụ ahụ na-apụta mgbe 1.5-2 izu, a pụkwara iri cilantro naanị mgbe otu ọnwa gasịrị.
Na mmalite nke osisi mbụ ahụ, a ghaghị ịme ka ikike ahụ dịkwuo nso n'ìhè.
Ilekọta cilantro n'ime ite dị mfe. Ọ bụ naanị mmiri, nri, mkpụbelata na igbo ahịhịa. Ịgbara mgbe mbido nke osisi mbụ ahụ na-ebelata, ma mgbe osisi ahụ na-eru nso oge okooko osisi ahụ, ifuru na-agbanye mmiri ọzọ. Mgbe nkeji iri na ise gasịrị mgbe ị gwụsịrị mmiri, a ghaghị ịmịpụ mmiri mmiri ka mmiri wee ghara ịrịa ọrịa na ájá.
Ọtụtụ ugboro n'izu iji mee ka mmiri dịkwuo elu, ọ dị mkpa ka ịgbawa ifuru si na obere iko. Ka usoro mgbọrọgwụ wee nweta oxygen, ala ga-atọpụ otu ugboro n'izu. Ebube kwesịrị ịdị na-egbuke egbuke, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ghaghị "osisi" ahụ.
Ị ma? Ọ bụrụ na ị na-atụgharị mkpụrụ osisi fatịlaịza na coriander, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ohia ga-abụkwu.
Otu ihe dị mkpa maka nlekọta maka cilantro bụ ịkọ ala. Fertilizing na mkpụrụ dị mkpa ọ bụla izu 2. Ọ ka mma iji nri ịnweta ịnweta nri ma tinye ha na ntụziaka ahụ.
Kinze chọrọ weeding na thinning nke bushes, nke a ga-eme mgbe niile. Ịgha mkpụrụ dị mkpa ọ bụghị nanị iji kpochapụ osisi nke ata ahịrị, kamakwa ka osisi ahụ na-ewute obere. Ntughari dị mkpa maka iwuli elu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụghị ifuru osisi.
Okpokoro ihe ubi cilantro nwere ike ịbụ otu ọnwa mgbe a ghaghasịrị, ya bụ, mgbe ohia ahụ pụtara 5-6 epupụta. Ọ ka mma ịdọka cilantro ozugbo tupu etinye ya na nri - ya mere, osisi ahụ ga-ejide uru ya. Enwere ike ịchekwa Coriander n'ụdị mịrị ma ọ bụ n'ụdị osisi.
Iji mee ka blanks nke cilantro dị ọcha, a na-ebipụ elu "n'okpuru mgbọrọgwụ" site n'ọhịa ma kpọọ ya na okpomọkụ, maọbụ ọ bụrụ na ị na-egbute osisi ahụ n'oge okpomọkụ, ị nwere ike ihicha ya na mbara ihu ahụ, ma mgbe niile na ndo. Mgbe okwute ahụ mịrị, a na-etinye ha n'ime akpa ma ọ bụ akpa ma jiri ya mee ihe.
A na-egbute mkpụrụ osisi Coriander n'otu ụzọ ahụ, na-achịkọta ha mgbe okooko osisi. Aghawo ahihia ma tinye ya n'ime akpa. Ịchekwa ụdị nkwadebe ndị a agaghị akwado karịa afọ 2.
Ọ dị mkpa! N'ikpuru cilantro na mkpụrụ osisi, ọnụ ọgụgụ nri dị ntakịrị karịa na ọkwa ọhụrụ.
Iji gbatịkwuo uto nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke cilantro, ị nwere ike ịkụzi ovary elu, mgbe ahụ oge owuwe ihe ubi ahụ ga-adịte aka. Ozugbo oge okooko osisi ahụ malitere, okpukpu coriander na-etowanye ma o nwere isi ísì ụtọ - site na oge a ọ gaghị ewepụ ọhụụ.
Iji mee ka coriander dị ọhụrụ chọọ icho efere gị n'afọ niile, ị nwere ike ịgha mkpụrụ cilantro n'oge dị iche iche. Usoro mmepe ga-ewe otu ọnwa, ya mere, na ọnwa ọ bụla gafere, ị ga-enweta cilantro ọhụrụ na tebụl gị.
Ihe na-adọrọ mmasị: ala nke sitere na osisi gara aga nwere ike iji ya mee ihe, mgbe ọ na-agbakwunye obere compost ma kpochapụ ya. Osisi a kụrụ ọhụrụ ga-azụlite n'ụzọ nke aka ya, nke a bụ ihe dị mma, nke kachasị mkpa, ihe a na-arụpụta bụ nke dị ọhụrụ n'afọ.
Iji cilantro mee ihe n'ụdị ọ bụla ga - eme ka ọ dịkwuo uto nke efere, ọ ga - enyekwa aka ahụike gị, n'ihi na ndị nna nna anyị maara banyere uru bara uru nke coriander. Usoro nke ịkụ na-eto eto dị nnọọ mfe na nke doro anya, nke na-eme ka cilantro ọbụna bụrụ ihe a na-ewu ewu n'etiti ndị na-ahụ nri na ite ndị na-ahụ n'anya.
Rosa Minerva - floribunda na-eto
Kedu ihe bara uru pasili decoction maka ihu, ma ọ bụrụ na ọ dabara?
Ruelia: nkọwa, ụdị, njehie nlekọta ụlọ
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na tomato seedlings na-ada n'ụlọ, na-arịa ọrịa ma ọ bụ nwee nsogbu ndị ọzọ?
8 isi na-emepụta ndị na-elekọta ubi
Etu esi eme glaze mbara ala: atụmatụ nke ọrụ nrụnye
Na-egbu onwe ya "Brunka": otu esi eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'ubi ahụ
Di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche nke Apple
Howea: nlekọta na mmezi